Nhanganyaya Type AH, HH, M pombi vari cantilevered, chinjikira, Centrifugal slurry pombi. Vari rakagadzirirwa kubata hasha kana kungatikanganisa slurry ari metallurgia, migodhi, marasha, simba, kuvaka zvinhu nezvimwe madhipatimendi maindasitiri etc. AH (R), HH vanonziwo rinorema basa slurry pombi, dzinoshandiswa kutakura simba hasha mukuru arambe achirema kana pasi arambe achirema mukuru musoro slurry. Mukutonga zvinobvumidzwa kumanikidzwa, kuti pombi izvi mhando anogona kuiswa munzvimbo multistage dzakatevedzana. HH mhando pu ...
Supply capacity: 5000 Pieces por Year
Payment Term :: L / C, T / T, D / P, Western Union, Money giremu
Tsamba: ISO9001, SGS, CE
Nyorai AH, HH, M pombi vari cantilevered, chinjikira, Centrifugal slurry pombi. Vari rakagadzirirwa kubata hasha kana kungatikanganisa slurry ari metallurgia, migodhi, marasha, simba, kuvaka zvinhu nezvimwe madhipatimendi maindasitiri etc.
AH (R), HH vanonziwo rinorema basa slurry pombi, dzinoshandiswa kutakura simba hasha mukuru arambe achirema kana pasi arambe achirema mukuru musoro slurry. Mukutonga zvinobvumidzwa kumanikidzwa, kuti pombi izvi mhando anogona kuiswa munzvimbo multistage dzakatevedzana. HH mhando pombi iri kunyanya kushandiswa kutakurirwa yakaderera arambe achirema mukuru musoro kana mukuru arambe achirema yakaderera hasha mukuru musoro slurry.
M (R) rudzi pakati basa slurry pombi, rinoshandiswa kutakura wakanaka PARTICIPLE saizi uye pakati arambe achirema slurry.
The liner uye impeller pamusoro AH (R) uye M (R) muenzaniso inogona kuchinjwa uye zvinhu zvinogona kunge Anti-hasha simbi kana rabha, asi zvinhu zviri liner uye impeller pamusoro HH muenzaniso chete anogona kuva simbi Bhaibheri. Rabha zvinhu nyoro zvikamu Anonyanyowanika kushandiswa anofambisa slurry ine yakanaka, non-jeko PARTICIPLE saizi.
Nomubato seal kuti mhando AH (R), M (R) uye HH Pumps zvinogona adoptable pamusoro shwanu chisimbiso, expeller chisimbiso uye chisimbiso zvokuimba. Zvinoyerera inogona akaiswa pana zvikamu rworwendo 45 nokuda chikumbiro uye nezvatinovavarira kune nzvimbo sere huenderane zvivako uye mafomu.
1. Bazi buditsa inogona akaiswa pana zvikamu e45 dhigirii.
2. replaceability Good yenhengo pamwe yepakutanga pombi.
3. Wear nemishonga simbi uye refu basa upenyu nguva.
4. With axial mukuru uye TOUR mutoro Rating vanokwanisa,
5. kubuda mirayiridzo inogona kuiswa pa zvikamu rworwendo 45 sezvo chikumbiro uye nezvatinovavarira kune nzvimbo sere huenderane mafomu.
6. Dzokuzvidzivirira yakasiyana raingova ezvinhu.
7. Wide chikumbiro, mukuru kushanda zvakanaka uye nyore kuramba.
8. Wide nzira kuti impeller.
9. Kupa kushandiswa gungano girisi lubrication.
Kusarudzwa Chart uye Performance
Pump Model Zvinobvumidzwa Max. Power
chinzvimbo Q Head
H (m) Speed ​​N (R / Nha) Max.Eff.
1. capacity siyana yakarumbidza: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' Zvakakodzera vanokwanisa panguva soro kunyatsoshanda nguva).
2. NPSH: zvakakodzera kuti anongedzere Q rakarumbidza pa soro nokukurumidza
The AH mhando slurry pombi vane pombi miviri kuti ine replaceable kusakara nemishonga simbi liners kana kupfeka nemishonga rabha liners, uye impellers vanogonawo kushandisa kusakara nemishonga simbi zvinhu kana kupfeka nemishonga rabha zvinhu. The HH mhando slurry pombi chete kushandisa kusakara nemishonga simbi zvinhu sezvo yavo pombi miviri uye impellers.
AH akatevedzana slurry Pombi zvinowanzoshandiswa simbi, migodhi, chicherwa kubudiswa, dredging, dewatering, kurapwa mvura, marasha kugeza, chigayo, nedutu zvokudya, tailing, simba, kuvaka zvinhu ... nezvimwewo. siyana maindasitiri nzvimbo. Pombi yedu zvinonzi mazita akasiyana zvakasiyana kushanda mabasa: Mineral kubudiswa pombi, Mill kubuda slurry Pump, Booster pombi, Feeding pombi, Tailing pombi, Transfer pombi Thickner Underflow Pump, De-kudiridza chinovhara pombi, Pressure pombi, Fungai pombi ...